Linus Torvalds inoda mutyairi mutsva weNTFS uye Paragon Software ndeayo | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds inoda mutyairi mutsva weNTFS uye Paragon Software ndeiyo
Munguva pfupi yapfuura Linus Torvalds akazivisa kuburitswa kwekutanga mukwikwidzi vhezheni yeLinux 5.14 uye pane izvi timu yekukudziridza tsanga inoramba ichishanda pane zvekupedzisira ruzivo pamberi peiyo vhezheni vhezheni.Hei zvinofungidzirwa izvo iyo yakagadzikana vhezheni yeLinux 5.14 inogona kuuya nemutyairi mutsva weNTFS, kunyanya iyo "NTFS3" mutyairi kubva kuParagon Software.
Uye ndeyekuti mune yekumisikidza pane Linux kernel tsamba yekutumira, Torvalds akakumbira Paragon Software kuendesa iyo kodhi yekubatanidza yavo nyowani yeNTFS mutyairi. Mutyairi anogona kuwedzerwa muLinux 5.14-rc2, kunyangwe Torvalds achifunga iyi vhezheni kunge yakatokura kare. Kana zvisiri, mutyairi anofanira kunge akagadzirira Linux 5.15.
Isu hatina munhu wekupomba mafaera nyowani masystems: fsdevel
Iyo tsamba yekutumira yakanaka kune makomendi uye kuwana mhinduro, asi imwe nguva mumwe munhu anongoda kuendesa, uye hazvisi izvo fsdevel anopedzisa kuita.
Iyo nharo yekuti 'yatove mune iri nani mamiriro kupfuura pakutanga
ntfs mutyairi «inogona kunge isingave yakasimba kwazvo technical technical (kwete nekuti
kubva kune chero matambudziko eParagon, nekuda kwekuti yekare ntfs mutyairi haasi
inotonhorera), asi nharo yakasimba yakasimba yekubatanidza iyo nyowani
Pakukurukura nyaya yekuparadzana emasimba nekuchengetedza kodhi yemafaira enzira uye madhiraivhu ane hukama neVFS, Linus Torvalds akataura kuda kubvuma zvigamba zvakananga Nekuitwa kutsva kweiyo NTFS faira sisitimu, kana Paragon Software inotora mabasa eNTFS semafaira sisitimu inochengetedza muLinux kernel uye inogamuchira vimbiso kubva kune vamwe vanogadzira kernel kuti vaongorora kurongeka kwekodhi (sezviri pachena, simbiso ikozvino yavapo).
Linus akacherekedza kuti pakati peVFS kernel vanogadzira hapana vanhu vane mutoro kubva pakugamuchira zvikumbiro zvekudhonza neFSs nyowani, saka zvikumbiro zvakadaro zvinogona kutumirwa kwaari pachezvake.
Muzhinji, Linus akataura kuti haaone chero matambudziko akasarudzika nekutora kodhi nyowani yeNTFS muchikamu chikuru chekernel, sezvo mamiriro anosiririsa eakare mutyairi weNTFS asingamiriri kushoropodzwa uye pakange pasina kunyunyuta kukuru nezve mutyairi mutsva weParagon kwegore.
Uyu mutyairi atove mune iri nani zvirinani inoshanda mamiriro pane yapfuura ntfs mutyairi kubva 2001.
Kana iyo nyowani kodhi yekodhi ine zvirevo kubva kuvanhu, uye zvinoita sekunge yakaita
uzviwane, uye Paragon inotarisirwa kuve iyo ichaichengeta, ipapo ini
Ini ndinofunga Paragon inofanirwa kuita git pull chikumbiro chayo.
Uye ndezvekuti gore rino shanduro makumi matanhatu neshanu dzematfs26 dzakataridzirwa mukati me "linux-fsdevel" tsamba yekutumira kuti iongororwe, ayo makomendi akabviswa, asi mubvunzo wekuisirwa mu kernel yakamira nekuda kwekusaita kwekutsvaga vanochengeta VFS, Ivo vanogona kuita danho pamibvunzo yepfungwa: zvekuita neyekare ntfs mutyairi, uye kana yekushandisa nhaka FAT ioctl kufona mune mutyairi mutsva.
Mune fomu yazvino, kugamuchira zvigamba, zvakafanira kuona mu ntfs3 kuenderana neshanduko dzakaitwa munguva pfupi yapfuura muIov API, saka chigamba chakamira kuvaka uye kana zvichikwanisika dudzira kodhi kuti ushandise fs / iomap (izvi zvinofungidzirwa kuti hazvishoropodzi uye kugadzirisa kwacho kunogona kutoitwa kana ntfs3 iri mukernel).
Iyo kodhi yeiyo nyowani yeNTFS mutyairi yakawanikwa neParagon Software muna Nyamavhuvhu gore rapfuura uye inosiyana kubva pane izvo zvatove mumutyairi kernel nekugona kushanda mukunyora mode.
Mutyairi anotsigira ese maficha eiyo yazvino vhezheni yeNTFS 3.1, kusanganisira akawedzera mafaira hunhu, datha yekumanikidza modhi, kubata kwakanaka kwemafaira emafaira, uye kutsiva kwerejista shanduko kudzoreredza kutendeka mushure mekukuvara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linus Torvalds inoda mutyairi mutsva weNTFS uye Paragon Software ndeiyo
Adobe anonamira munharaunda yeBlender nekujoinha iyo Blender Foundation